Radicle, ezigbo ikpo okwu mmepe | Site na Linux
Ọchịchịrị | | Na-atụ aro, Netwọk / Sava
Na nso nso weputara mbuputa nke beta nke mbu nke ikpo okwu Radicle P2P na onye ahịa ya desktọọpụ Radicle Upstream.
Ọrụ ahụ Ebumnuche iji mepụta ọrụ ntanetị maka mmepe mmekọrịta na nchekwa koodu.
Radicle na-enye ohere ka ọ ghara ịdabere na nyiwe na ụlọ ọrụ etiti maka mmepe na mmepe ihe mepere emepe, nke njikọta na-ewebata ihe egwu ndị ọzọ (otu isi nke ọdịda, ụlọ ọrụ nwere ike imechi ma ọ bụ gbanwee ọnọdụ ọrụ).
- Ijikwa koodu na Radicle a maara nke ọma Git, gbasaa site na ịkọwapụta nchekwa na netwọk P2P. Onye obula a na-echekwa data na mpaghara na ha dị mgbe niile na kọmpụta onye nrụpụta, agbanyeghị ọnọdụ nke njikọ netwọk ahụ. Iji kpuchido ozi ahụ, a na-eji cryptography dabere na igodo ọha, na-ejighị akaụntụ. Enwere ike ịhụ ndepụta nke ndị na-edebanye aha nke netwọk P2P na mkpụrụ mkpụrụ nke ọrụ ahụ.
Na obi nke P2P netwọk bụ Git dabeere na usoro Radicle Link nke na-eme data n'etiti ndị sonyere. Ndị na-eso ha na-enye ohere ịnweta koodu ha na koodu nke ọrụ ha nwere mmasị na ya, a na-echekwa ya nke ukwuu na mpaghara ma na-emegharị ya na sistemụ nke ndị mmepe ọzọ nwere mmasị. N'ihi nke a, etolitere ebe nchekwa Git zuru ụwa ọnụ, nke a na-emegharị data ya ma mepụtagharị n'akụkụ sistemụ dị iche iche.
Usoro nkwekọrịta ahụ na-akwado ụdị njirimara abụọ: onye otu na oru ngo. Onye so na ya na-akpọtụrụ onye malitere node na netwọk P2P (par) na oru ngo a na-akowa ebe nchekwa ebe otutu ndi ozo nwere ike iru oru.
Netwọk ahụ na-emepụta mmekọrịta ọha na eze nke nkwukọrịta n'etiti ndị sonyere na ọrụ ahụ: Ndi sonyere na-esochi ihe oru ha choro ha na ndi ozo. A na-enye ndị ọzọ sonyere ihe sitere na esoro esoro na-eso onye so na ya ugbu a.
Mmepe na-ewere ọnọdụ ụdị '' bazaa '' kama ịchekwa echiche nna ukwu canonical na Radicle, enwere ngalaba abụọ yiri ya na ndị na-elekọta ha na ndị na-enyere ha aka na-emekọrịta ibe ha.
Kama ijikọ na ebe nchekwa ntinye ederede, Radicle dabere na nchekwa pụrụ iche na igwe mpaghara nke onye nrụpụta ọ bụlar, ebe inwere ike iwepu ngbanwe site na nchekwa nke ndị na - atụnye ego esoro ma nyefee mgbanwe gị na nchekwa nke ndị na - ahụ maka nsuso.
N'echiche, oru ngo na-aghọ nchịkọta nke echiche koodu na sistemụ nke ndị niile sonyere na mmepe ahụ. Na omume, a na-ahazi ndị isi nnyefe mgbanwe na-adabere na usoro ntụkwasị obi: iji nata mgbanwe na mpaghara nchekwa ha, onye nrụpụta na-agbakwunye ndị mmepe ndị ọzọ dị ka (ebe dịpụrụ adịpụ), nke na-etolite ndenye aha maka ọrụ ọhụrụ ahụ. na-egosi na nchekwa ha. Mgbanwe niile dị na netwọk P2P bụ akara aka na nọmba ma ndị ọzọ sonyere ya.
Thezọ kachasị mfe iji jikọọ na netwọk bụ ịwụnye ngwa desktọọpụ Radicle Upstream, nke na-enye gị ohere ịmepụta igodo iji mata onye ọhụrụ, nabata koodu gị, ma soro ndị mmepe ndị ọzọ kwurịta okwu.
Ugbu a, mmejuputa iwu ejedebe na nkwonkwo oru na koodu na bug tracking system, ma n'ọdịnihu ha na-eme atụmatụ ịgbasa ngwaọrụ iji hazie mkparịta ụka na nyochaa mgbanwe, yana itinye nkwado maka ntinye ego nkeonwe na nnweta dabere na izo ya ezo na njedebe.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele esonụ njikọ.
Edere koodu nnọchi maka ọrụ ọnụ na Rust, na onye ahịa ihe osise na TypeScript, Svelte na Electron. Ihe mmepe nke oru ngo a A na-ekesa ha n'okpuru ikikere GPLv3.
Ihe nchịkọta dị njikere maka Linux (AppImage) na macOS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Radicle, usoro ikpo okwu mmepe